महिलालाई मारेको अभियोगमा भेडालाई तीन वर्ष जेल ! « Nagarik Khabar
प्रकाशित मिति : 25 May, 2022 7:54 am
भेडाले चापिङलाई बारम्बार टाउकोमा हानेर उनको करङ भाँचिएको थियो । गम्भीर चोटका कारण ४५ वर्षीया महिलाको तत्काल मृत्यु भएको थियो । रुम्बेक इस्टको अक्युल योलमा भएको सो घटनापछि भेडालाई पक्राउ गरी प्रहरी चौकीमा राखिएको थियो । मेजर एलियाह माबोरले भने, ‘मालिक निर्दोष छन् र अपराध गर्ने भेडा नै हो, तसर्थ यो पक्राउ गर्न योग्य छ ।’
भेडालाई तीन वर्ष जेल !
काठमाडौँ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टेक्सास स्कुल नरसंहारपछि बन्दुक नियन्त्रणमा गरिएका आह्वानलाई अस्वीकार गर्दै
प्योङयाङ । उत्तर कोरियाले तीन वटा व्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको छ । उत्तरले बुधरबार पूर्वी
शपथलगत्तै टोकियो जाँदै अष्ट्रेलियाका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री एन्थोनी
सिड्नी । एन्थोनी अल्बानिजले अष्ट्रेलियाको नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका छन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री एन्थोनी